FAKAFAKA: ho fanatsarana ny literatiora malagasy | NewsMada
Ahitsy ny fiheverana fa ny literatiora dia tsy fialamboly fotsiny ihany na fanalana andro fa tena fiainana mihitsy. Ampirisihina ny ankizy hamaky boky, indrindra ny literatiora fahiny, ary ampidirina amin’ny fandaharam-pianarana ny fototra sy tantaran’ny literatiora malagasy. Hatsangana ny sekoly manokana ho an’ny zava-kanto malagasy … Miroborobo, saingy tsy mivoatra fa mihemotra ny literatiora ankehitriny. Tsy ampy ny ivontoerana na fampianarana manokana mikolokolo ny tanora amin’ny sehatry ny zavakanto. Zary lasa mandeha amin’ny herin’ny tenany ny mpanoratra amin’izao ka tsy maharitra ela fa mandalo ihany ny hazavana entiny. Rahateo, efa nampianarina antsika tany amin’ny ambaratonga fototra fa ny “literatiora dia natao hanalana andro, fialamboly”.
Andaniny, tsy ampy ny faribolan-tsehatra hifampizarana, indrindra ny takalo eo amin’ny zoky sy ny zandry. Ny zandry aty aoriana , mieritreritra efa mahasongona sahady ireo zokiny, ny zokiny rahateo tsy manao dingana voalohany amin’ny zandriny « araka ny lalàn’ny fiarahamonina tokoa izay » . Amin’izaovanimpotoana izao, mifamahofaho be ihany ny resaka mpanoratra, ny fanoratsoratana ainga aparitaka etsy sy eroa , indrindra amin’ny tambajotran-tserasera sy ny fanaovana hetsika tsy masaka tsara. Ny famoaham-boky tefy maika ve no mahafaritra ny antsoina hoe Mpanoratra na poeta ? Tsy misy hifanomezan-tsiny … Tsy misy handrara tsy hanoratra velively … Aina ho an’ny firenena rahateo ny literatiora ary voninahitra ny fananana mpanoratra maro …. Fa mpanoratra manao ahoana tokoa ny hovolavolain’ity taom-polo ity?”
Manana adidy ny tsirairay na ny fanjakana na ny olontsotra mpamaky boky, indrindra ny mpanoratra sy ny mpandalina literatiora. Anisan’ny vahaolana amin’izao aretin’ny literatiora izao, ny fanarenana ifotony. Ampahafantarina ny ankizy any amin’ny garabola sy ny fanabeazana fototra ny anjara asan’ny literatiora sy ny maha zava-dehibe azy eo anivon’ny firenena sy ny maha olona. Ampahany ihany ireo fa maro ny azo atao hanatsarana ny tontolon’ny literatiora.